Articles – Page 140 – CELE WINGAGAR
ကိုဗဈရောဂါကွောငျ့ Lockdown ခခြံထား ရတဲ့ မိသား စု တှေ အတှကျ လို အပျ တာ အဝဝကို လှူဒါနျးပို့ဆောငျပေးခဲ့တဲ့ အိမျ့ခဈြ….
နာမညျကွီးအဆိုတျော ခဈြကောငျးရဲ့သမီးလေးဖွဈတဲ့ အဆိုတျောအိမျ့ခဈြကတော့ ဖခငျဖွဈသူရဲ့ခွရောကိုတဈ ထပျတညျးနငျးနိုငျသူလေး ဖွဈပါတယျ။ အသံပါဝါအားကောငျးကောငျးနဲ့ သီခငျြးတှကေိုသီဆိုတတျတဲ့ အိမျ့ခဈြ က ကိုယျပိုငျအရညျအခငျြးတှနေဲ့ ဂီတလမျးကွောငျးထကျမှာ အောငျမွငျနတော ဖွဈပါတယျ။ အိမျ့ခဈြက တဈ ကိုယျတျောအခှတှေထှေကျရှိအောငျမွငျခဲ့သလို ရှိုးပှဲကွီးတှမှောလညျး ပါဝငျဖြျောဖွနေရေတာဖွဈပါတယျ။ သီခငျြးကောငျးလေးတှေ ဖနျတီးတတျပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျောလေးဖွဈနတေဲ့ သူမက လူငယျပရိသတျ […]
အောက်စီဂျင်လိုအပ်နေတဲ့ အရေးေ ပ်ါလူနာကို ကူညီရင်း ကိုဗစ်ကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ အဆိုတော် ယုန်လေး…
July 19, 2021 100million 0
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ.. အဆိုတော်ယုန်လးဟာ ဆိုရင် တေးသီချင်းများစွာကို သီဆိုခဲ့တဲ့အဆိုတော်တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါ တယ်။ယုန်လေးက အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေမလုပ်ကိုင်ဖို့အတွက် တစ်နှစ်အပိတ်ခံလိုက်ရတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်မှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ သင်္ကြန်ပွဲတော်မှာသွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ အတွက်ပရိတ်သတ်တွေ အကြီးအကျယ်ပေါက်ကွဲပြီးဒေါသထွက်သည်အထိ ယုန်လေးကို စိတ်ဆိုးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်… ။ခုနောက်ပိ်ုင်းမှာဆိုရင်လည်း ယုန်လေးကို ပရိတ်သတ်တွေက သူ့ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှု့တွေကိုပါ အားမပေးတော့ပဲ မုန်းတီးနေကြတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်း ယုန်လေးတစ်ယောက် အရေးပေါ်အောက်စီဂျင်လိုအပ်နေတဲ့ […]
အရင်ကရည်းစားဟောင်းကို သူမ အနားမှာရှိခဲ့စဉ်တုန်းက တ န်ဖိုးမ ထားဂရုမစိုက်မိ လို့ နောင်တတွေများစွားနဲ့လွမ်းဆွတ်နေတဲ့ သံစဉ်မောင်….
ပရိသတ်ကြီးရေ မနေ့ညက သတင်းထောက် မရတ်ကျော်သူရဲ့ အချစ်ရေးပြသနာကို live လွှင့်ရှင်းတဲ့ အေ ကြာင်းဟာ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နော်။ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆိုရှယ်မီ ဒီယာမှာမိန်းကလေးအများစုက သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ဟ ရေးသားလာကြပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင် သံစဉ်မောင်ကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေက သူမအပေါ်ကောင်းခဲ့တဲ့ […]
ကိုဗစ်ကာလကြီးမှာ အားလုံးခက်ခဲနေဖြ စ်နေတဲ့ အချိန် အလှူ လာခံတဲ့သူတွေ ကို ပွင့်ပွင်းလင်းလင်းပြောလိုက်တဲ့ လမင်းကဗျာ
ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတော်တော်များများမှာ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံနေရာက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ေ နကျ မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ လမင်းကဗျာ ကတော့ အခုလက်ရှိမှာအပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်နေတြာ ဖစ်ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင် ဦးစီးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဆိုင်လေးကတော့ နေရာတစ်ခုရနေချိန်မှာပဲ ကိုဗစ်ကြောင့်ပိတ်လိုက်ထားရပါတယ်…။ ဒါပေမဲ့ ကိုဗစ်အစပိုင်းမှာတော့ အော်ဒါတွေနဲ့ လည်ပတ်နေတာကိုတွေ့ရပြီး လမင်းကဗျာ ကတော့ြ ပန်မရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို […]
သူမနာမည်ကိုအ လွဲသုံးစား လုပ်ကာ အောက်စီ ဂျင်ဖိုး ငွေလိမ်ဖို့ကြိုး စားသူ ကို သက်သေနဲ့တကွချပြလာတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်….
ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးရေ လတ်တလောအခြေအနေမှာ အောက်ဆီဂျင် ပြတ်လပ်မှုတွေကြောင့် ရော ဂါဝေဒနာခံစားနေ ရတဲ့ပြည်သူတွေအတော်လေးကို သောကတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ အောက်ဆီဂျင် အိုးလိုအပ်နေကြသူများက ပုံမှန်ဈေးထက်ငွေကြေးမြောက်မြားအကုန်အကျခံ ကာရှာဖွေ ဝယ်ယူနေမှုတွေကြောင့် မသမာသူတွေတစ်ချို့က ငွေတွေလိမ်လည်သွား ကြတာကို လည်းစိတ်မကောင်းစွာမြင်တွေ့နေရပါတယ်။ မနေ့ညက သရုပ်ဆောင် နှိုင်းရှင်မြင့် မိုရ်ရဲ့ […]
အင်းလျားစင်တာမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ အစီအ စဉ်တင်ဆက်သူ ကောင်း ထက်ဇော်ရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေ
ပရိသတ်ကြီးရေ ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် များစွာသော ပြည်သူတွေ သေဆုံးနေကြရပါ တယ်နော်။ ကိုဗစ်ရောဂါဟာအသက်အရွယ်မရွေး ကူးစက်တတ်တာကြောင့် မည်သူမဆို ဂရုစိုက်ပြီးသွားလာနေထိုင်ရတဲ့ အချိန်ကာလကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်။ အနုပညာရှင်များနဲ့ နာမည်ကြီး ဆယ်လီများလည်း ကိုဗစ်ကူးစက်ခံနေရပါတယ်နော်။ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ကောင်းထက်ဇော်လည်း ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံနေရပြီး အောက်ဆီဂျင်လိုနေတဲ့အ ထိကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးဝါးနေကြောင်း သိရပါတယ်နော်။ ကောင်းထက်ဇော်ဟာ […]
ဇူလိုင်လ (၈) ရက်နေ့ က ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီး အခုပြန်လည်လွ တ်မြောက်လာ ပြီဖြ စ်ကြောင်းပြောပြလာတဲ့ တိုင်ရွန်….
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…သရုပ်ဆောင် တိုင်ရွန်ကတော့ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်မှ ရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းလောက်က တိုင်ရွန်တစ်ယောက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း တိုင်ရွန်ရဲ့သတင်းကို ကြားပြီးသူ့အတွက် စိတ်ပူနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ရက်ပိုင်းလောက် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပေမယ့် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို […]
​အောကျဆီ ဂငျြ အလှူလေး အတှကျ ငှကေပျြ(၅) သိနျးကို ဝဠေု ကြျော ဖောငျဒေး ရှငျးထံ လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ ကောငျးမွတျစံ…
ပရိသတျကွီးရေ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ ပါးခြိုငျ့လေးနဲ့ နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုတှကေို ရရှိထားတဲ့သူကတော့ မငျးသားခြောလေး ကောငျးမွတျစံပဲဖွဈပါတယျ။ ကောငျးမွတျစံက ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲတှထေဲကနေ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ သရုပျဆောငျမှုတှကွေောငျ့ ပိုမိုလူသိမြားလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာလညျး အနုပညာအလုပျတှကေို ဆကျတိုကျလုပျကိုငျနပွေီး သရုပျဆောငျကောငျးတဈယောကျဖွဈအောငျလညျး ကွိုးစားနတောဖွဈပါတယျ။ မငျးသားကောငျးမွတျစံကတော့ လတျတလောဖွဈပျေါနတေဲ့အခွအေနတှေနေဲ့ ပတျသကျပွီး ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ရပျတညျနကော လိုအပျနသေူတှအေတှကျလညျး […]